Amanqaku aseNtaliyane: Ubulili kunye nenani
Funda indlela yokukhetha isini esifanelekileyo kunye nenani lezibizo
Xa uqala ukufunda igrama yoTaliyane , uya kuvakala ingqiqo ephindaphindiwe ngokuphindaphindiweyo kwaye yiyo: Yonke into yesiTaliyane kufuneka ivumelane ngesini kunye nenani.
Ngaphambi kokuba wenze njalo, kufuneka ukwazi ukuba isini kunye nenani liseNtaliyane.
Zonke izibizo zesiTaliyane zinesini ( il genere ) ; oko kukuthi, bafana besilisa okanye besetyhini, nokuba nabo babhekisela kwizinto, iimpawu, okanye iingcamango.
Le nto ingaba yinto engaqhelekanga kwizivakalisi zesiNgesi eziqhelekileyo njengoko imoto ayisoloko icingelwa njengowesifazana (ngaphandle kweemoto ze-aficionados) kunye nezinja azicingwa njengabantu besilisa, njengesiNtaliyane.
Ngokuqhelekileyo, izibizo eziqhelekileyo eziphela -o ziyizondo xa izibizo eziphela -a zizazisetyhini. Kukho inani lokungabikho , njengoko il poeta - imbongi, ukuba ngumntu, kodwa unamathela kumgaqo ongentla xa ungathandabuzeki.
I-TIP: ezininzi izenzibi zaseItali ( i-nomi ) ziphelile kwi- vowel . Iimpawu ezigqityiweyo kwiintetho zivela kwimvelaphi yangaphandle.
Nantsi imimiselo yebizo zamagama zesintu kunye namabhinqa.
Into ebaluleke kakhulu ukuyijonga ukuze kuqinisekiswe ukuba ubulili yinqaku ecacileyo , kodwa uya kuqaphela ukuba izibizo eziphelile -e zi nokuba ngamadoda okanye zifazi, kwaye zinjengezinto ezininzi ezithandekayo ofuna ukuzifunda, ubulili ezi zibizo kufuneka zikhunjulwe.
Iimpawu zeMasculine ukuze zikhunjulwe
Iimpawu zeMazi ukukhumbula ngeSikhumbuzo
Iimpawu eziphela -yodwa ngokuqhelekileyo ibhinqa, ngelixa izibizo eziphelayo -zizonke zihlala zisiswini .
i-televis ione (f.)
i- ore (m.)
i- naz ione (f.)
i-opin ione (f.)
zibiza i- ore (m.)
Kuthiwani ngamagama afana ne "bar" ekugqibeleni kwi-consonant?
Ezi zibizo zidla ngokufana nabantu, njengebhasi, ifilimu okanye imidlalo.
Kutheni i "Cinema" Masculine?
Uza kuqala ukuqaphela ukuba kukho amagama athile obonakala ngathi ungumfazi, njenge "cinema", ekubeni iphelile kwi--a, ngokwenene isilisa.
Oku kwenzeka ngenxa yokuba izibizo ezifingqiweyo zigcina ubulili bamazwi avela kuwo. Ngokomzekelo ongasentla, "i-cinema" ivela kwi- cinematografo , eyenza igama lendoda.
Amanye amagama aqhelekileyo oku kuchaphazela:
ifoto f. (ukusuka kwifotografia)
moto f. (ukusuka kwi-motocicletta)
auto f. (kwimoto)
bici f. (ukusuka kwi-bicicletta)
Ingaba iyinyaniso okanye ininzi?
Ngokufanayo nesiNgesi, isiTaliyane sinokuphela kwesiphelo xa isibizo sisinye okanye ubuninzi. Ngokungafani nesiNgesi, zikhona iziphelo ezine ezikhoyo kunokuba isiNgesi siphethe.
amico (m.) umhlobo →
studentessa (f.) → umfundi
amica (f.) umhlobo →
studente (m.) → umfundi
I-TIP: Iimpawu eziphela ngegama elivakalayo okanye i- consonant ayitshintshi ubuninzi, kwaye awanamagama aqingqiweyo.
I-caffè (enye ikhofi) -> ngenxa ye-caffe (ii-coffees ezimbini)
Ifilimu (enye i-movie) -> ifilimu efanelekileyo (amabhayisikobho amabini)
Unayo ifoto (enye ifoto) -> ifoto ifoto (ezimbini iifoto)
Ukufunda isini kunye nenani lebizo ngalinye lisebenza, ngoko ungacinezeli ukuba usenza iimpazamo. Ngokuqhelekileyo amaTaliyane aya kukwazi ukukuqonda, ngoko nje gxininisa ekuzivakaliseni kwaye ungakhathazeki ngokuba negrama.
Injongo yokufunda ulwimi lwangaphandle iya kuhlala ixhamla endaweni yokuphelela .
Ngaba loo Noun Isintu okanye Umfazi?
Iinguqulelo zentsingiselo ngesiSpanish ngokuxhomekeke ekusebenziseni 'uSer' okanye 'u-Estar'
Izimpendulo ezingalunganga kumaKristali aMagical
Yiyiphi i-Double-Genitive (kwaye Ngaba Kukho Nento Engalunganga Ngayo)?
Iingoma ezi-10 ezintsha zothando kwiNtsuku ka-Valentine 2016